काठमाडौं : टि’कटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा ख’सेर तनहुँमा एक किशोरी बेप’त्ता भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ लालिमकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्साल बेप’त्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौताराले जनाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ पुलचोकस्थित सेतीनदी किनारमा रहेको रक गार्डेनमा ‘टिकटक बनाउने क्रममा उनी ख’सेर बेप’त्ता भएकी हुन् । आफ्ना दुई साथीसँग घुम्नका लागि पुलचोक… Read More »
रुपन्देही – संसारमा भगवान भन्दा पनि ठुलो देवता भनेको आमाबुबा मानिने गरिन्छ।छोराछोरीलाई ज्वोरो आयो भने आमाबुबा रातभरि न सुती आफ्नो बालबालिकाकाे उपचारका निम्ति काँहा काँहा पुर्‍याउँछन् यो कस्तो कलियोग हो आफ्नै नौ महिनाको बच्चालाई आफ्नै आमाबुबा द्वारा घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ। रुपन्देहीको गैंडहवा गाउँपालिका वार्ड न ६ सुर्यपुरा बजार नजिकै बस्ने श्रीराम मल्लहा(गानि)नाम गरेको… Read More »
फेरी देखियो यस्तो घातक पुतली, उपचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति गुम्ने
पोखरा क्षेत्रमा हिजोआज (सापु) को संक्रमण देखा परेको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग बिषशेज्ञ डा. इन्द्र महर्जनका अनुसार विगत दुई साता देखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परेको बताए । आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले… Read More »
काठमाण्डौ – कतारले नेपालबाट लिने भनेको कतार प्रहरीको माग रद्द गरेको छ । अहिलेलाई कतार प्रहरीमा नेपाली भर्ना नगर्ने कतारले प्रष्ट पारेको छ । कतारले अघिल्लो वर्ष नै नेपालबाट प्रहरीको लागि माग भइ आएकोमा नेपाल सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा त्यो माग अन्तैबाट पूर्ति गरेको कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयबाट नेपालको अल तकेत… Read More »
मन्थली आउँदै गरेको बोलेरो दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
ओखलढुंगा, ३१ भदौ । ओखलढुंगा आउँदै गरेको बोलेरो रामेछापकाे मन्थली नगरपालिका वडा नं १ कुनाैरी, बाेक्सेको भिरमा दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा एक महिला सहित तीन जनाकाे मृत्यु भएको छ । भने एक बालक गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको परिचय खुलेको छ । गम्भिर घाइते हुनेमा १२ वर्षीय पेम्बा शेर्पा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय… Read More »
संखुवासभा हत्याकाण्डमा नयाँ ट्विस्टः रञ्जना सुत्ने कोठामा राखेको मोबाईल नरेशको खल्तीमा
काठमाडौं, भदौ ३१ । संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ स्थित उम्लिङमा ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले यसअघि पक्राउ गरेका हत्या आरोपी लोकबहादुर कार्कीका भाई २५ वर्षीय न|रेशलाई पनि नियन्त्रणमा लिएसंगै घटनामा नयाँ ट्विस्ट देखिएको छ । उक्त घटनामा हत्या गरिएकी ३२ वर्षीय बुहारी रञ्जना कार्कीको मोबाइल हत्या… Read More »
मिठो निन्द्राका लागि उपयोगी टिप्स
शरीर स्वस्थ्य रहन र मन शान्त हुन निन्द्रा अपरिहार्य छ । निन्द्रा पर्याप्त भएन भने मधुमेह, डिप्रेसनजस्ता रोग लाग्नुको साथै मोटोपन बढ्ने समस्या पनि देखा पर्दछ । त्यसैले मीठो र गहिरो निद्रा जगाउन यि टिप्स अपनाउँ १. रातमा थोरै खाने नेपालीहरुमा रातको खाना पेट डम्म हुनेगरी अघाउँजी खाने बानी छ । तर यति धेरै मात्रामा… Read More »
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट बच्न हामीले मास्कको प्रयोग गर्दै आएका छौं। तर मास्कको सही प्रयोग भएको छ कि छैन भन्नेबारे ध्यान दिनु जरुरी छ। मास्कको सही प्रयोगबाट नै सुरक्षित रहन सकिन्छ। मास्क लगाउँदैमा कोरोना लाग्दैन भन्ने होइन मास्कको सही प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। कतिपयले बाहिर जाँदा मास्क चिउँडोमुनि लगाउने, लगाएको मास्क खोलेर कुरा गर्ने, घर आएपछि… Read More »
एजेन्सी । संसार विचित्रको छ अनि मानिसहरु पनि। कहिलेकाहाीँ उनीहरुले गर्ने ह’र्कत पनि विचित्रको नै हुन्छ। मेक्सिको हाल यस्तै एक घटना भएको छ। क्विनटाना रोका प्रहरीमा एउटा निकै अचम्मको उ’जुरी परेको छ। त्यहाँकी एक महिलाले आफ्नी २३ वर्षीया छिमेकीमाथि देखिने गरी भित्री वस्त्र सुकाएकोमा आपत्ति जताउँदै उ’जुरी नै दर्ता गरेकी छिन्। उनको अनुसार ती छिमेकीले… Read More »
हेटौंडा : मकवानपुरको एक गाउँपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरी, जसले दुई साताअघि एक छोरालाई जन्म दिइन्। जन्मिने बित्तिकै छोराको चि’च्याह’टले उनलाई उनको भविष्य देखाएको थियो। सन्तान ज’न्मिएपछि हरेक बाबु आमाले उनीहरुसँग जोडेर आफ्नो भविष्य देख्छन्। तर उनले देखेको भविष्य र चि’न्ता सामान्य मानिसको भन्दा धेरै फरक थियो। किनकी उनी एक अविवाहित किशोरी आमा बनेकी थिइन्। अझ… Read More »